Borussia Dortmund Oo War Kasoo Saartay Go'aanka Erling Braut Haaland Ee Kama Dambaysta Ah
HomeWararka CiyaarahaBorussia Dortmund oo war kasoo saartay go’aanka Erling Braut Haaland ee kama dambaysta ah
January 18, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Borussia Dortmund ayaa beenisay in ay wakhti kama dambays ah u dhigtay weeraryahankeeda Erling Braut Haaland si uu go’aan uga gaadho halka uu doonayo in mustaqbalkiisu dhigo.
21-sano jirkaan ayaa todobaadkii hore sheegay in kooxda reer Jarmal ay ku degdegeen inuu go’aan ka gaaro tallaabada xigta ee mustaqbalkiisa, iyadoo lala xiriirinayo kooxo badan oo Yurub ah oo ay ku jiraan Manchester City, Real Madrid iyo Barcelona.
Haaland waxa uu sii wadey inuu wacdaro ka dhigo Dortmund, isagoo 21 jeer shabaqa soo taabtay 19 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, oo uu weheliyo 10 caawin 13 kulan oo Bundesliga ah.
Agaasimaha ciyaaraha Borussia Dortmund Michael Zorc ayaa u sheegay Kicker : “Hadalka Erling ayaa naga yaabiyay xoogaa, hadda ma jiro waqti kama dambays ah, ma jiro waqti kama dambays ah, mana jirin xitaa wax wadahadal ah.
Qandaraaska Haaland ee Signal Iduna Park waxa uu gaarayaa ilaa 2024, taas oo wax ku kordhinaysa qiimaha ay Dortmund dul dhigi karto gooldhaliyaha da’da yar, iyadoo wararka qaar ay soo jeedinayaan inuu ku kici karo 292 milyan ginni .
Tan iyo markii uu Dortmund yimid Janaayo 2020 kana yimid Red Bull Salzburg, Haaland wuxuu dhaliyay 78 gool 77 kulan oo uu u saftay kooxda.